Khabiir Cajiib ah: Sidee Cilmi-baarista Loogu Taaban Karo Waxay Ka Maqnaan Doontaa SEO
cilmi-baarista muhiimka ah, taas oo qayb muhiim ah ka ah olole kasta oo SEO ah,ayaa jirey sannado badan. Si kastaba ha noqotee, inta lagu jiro dhowrkii sano ee la soo dhaafay ayaa cilmi-baaris ku-ool ah oo isbeddeley. Mararka qaarIsbeddeladani waa muhiim, mararka qaarkoodna maaha kuwo muhiim ah. Xaalad waliba, dabeecadda aan kacsaneyn ee geeddi-socodkani waxa uu ugu yeedhayaa su'aashatixgelinta cilmi-baarista muhiimka ah ee SEO-ga
Jack Miller, Maamulaha Guusha Macaamiisha ee Sare Adeegyada Digital, falanqaynta arrimaha, taas oo hadda iyo dheeraad ah ay qeexayso muhiimadda cilmi-baarista muhiimka ah.
Ereyada ayaa muhiim u ah SEO maxaa yeelay waxay cayaaraan muhiimdoorka caawinta boggaaga si aad u hesho darajada su'aalaha raadinta kala duwan. Cilmi-baarista kelmadu waxay kuu oggolaaneysaa inaad heshid ereyada muhiimka ah ee ku siinaya:
Gaadiidka sare - stadt illnau effretikon entsorgung affoltern. Waxaad heli doontaa martida cusub sababtoo ah adigagoobta ayaa lagu taxay natiijooyinka raadinta
Laba. Dhamaan baaritaanada soo socda waxay la xiriiri doonaan waxawaxaad bixisaa iyo haddii ay ku qancineyso dadka isticmaala buugaagta.
tartan hoose. Haddii aad leedahay ereyo muhiim ah, waamacnaheedu waa inaadan u baahnayn inaad shaqeyso wakhti dheeraad ah si aad uhesho wixii su'aalo ah ee aad dooratay.
Dib uhabaynta Google
Maalmihii ugu horeeyay ee cilmi-baadhista muhiimka ah, is-waydaarsigu wuxuu ku fashilmayiyaga oo walbahaaga ku jira walxahaaga maadada oo dhan inta aad kartid. Iyada oo Google Analytics, Google ayaa sidoo kale soo bandhigay wax badanmacluumaadka ku saabsan sida dadku u raadin lahaayeen macluumaadka ku saabsan webka iyo sida ay u heleen boggaga internetka adiga oo adeegsanaya ereyada muhiimka ah..Markaad haysatoLiiskaan ee gaadiidka sare iyo keywords tartan yar, waxaad si toos ah u hagaajin kartaa goobta aad u weydiineyso su'aalaha. Inta badan su'aalaha Googlewaxay lahaayeen xiriir raadin hal-qof ah oo macnihiisu yahay in ay qaadanayaan weedhaaga ama ereygaaga oo raadso xirmo u dhaw ama saxan oo ku saabsan jumlado kaleiyo erayada shabakada.
Sanadka 2013-kii Google wuxuu soo saaray qoraal cusub oo loo yaqaan Hummingbird, kaas oowaxay soo bandhigtay fikradda ah "raadinta semantic". Cusboonaysiintaan ayaa isbeddelay sida habka mashiinka raadinta u shaqeynayey weydiimaha soo socda. Bedelkiisameynta baadhitaan cad oo ah waxa uu rabo, warkan waxaa loo ogolaaday Google inuu fahmo niyadda ka dambeysa su'aalaha user. Qiimaha wajiga,Tani waxay u muuqataa in ay tahay isbedel yar, laakiin waxa ay saameyn weyn ku yeelatay sida ay ufududayaasha raadinta u eegayaan ereyada muhiimka ah.
Warbixintan ayaa bedeshay SEO ma aha oo kaliya hadalkeedaiyo erayada muhiimka ah. Maanta waxaa suurtogal ah in lagu daro heer sare oo loogu talagalay ereyo la isku xiri karo iyo ereyada, oo aadan toos ufixin, waxaad sidoo kale sameyn kartaahelitaanka darajooyinka erayada iyo weedhaha aan xitaa laga helin boggaaga. Ereyadan waxaa loo yaqaan 'Qodobbada Loogu Taaban Karo'. Waxay leeyihiinwaxaa lagu caan baxay Hummingbird waxayna iibsadeen ganacsiyo raadinaya ereyo naadir ah oo yar. Waxay micnaheedu tahay in halkii laga sii deyn lahaaereyada muhiimka ah, shirkadaha waa in ay si fiican u dhisaan sheekooyin ku saabsan hal erayga muhiimka ah ama weedha markaad diirada saareyso mawduuca guud
Xayiraadaha Google ee ereyada muhiimka ah waxay bilaabeen Google Analyticsoo tani waxay sii waday AdWords. Tan macnaheedu waxaa weeye in dadka lagu dhiirrigeliyo in ay isticmaalaan xayeeysiinta lacagaha ah ee ay mushahar ku bixiyaan dabadeedna ay burburiyaan kadib guulo degdeg ahXaqiiqdii, mararka qaarkood waxay noqotaa mid aad u haboon suuqa suuqgeynta marka loo eego qorshooyinka habboon ee tarbiyada keydinta
Iyadoo la raacayo dhammaan arrimaha kor ku xusan, waa in aan fahamnoin tiknoolajiyada cusubi soo gasho ciyaarta, tusaale ahaan, sida ay u dhacday caawiye digital ah sida Cortana iyo Siri. Waxay dadka ku dhiirri-gelisaasameeyaan raadinta wadahadalka, taas oo bedeleysa ciyaarta oo dhan. Xaqiiqo la taaban karo, xirmooyinka iyo xaqiiqada dhijitaalka ah ayaa sidoo kale isbedelaya sidadadka raadinaya iyo sida nidaamka kumbuyuutarku u shaqeeyo. Iyadoo isbedello badani la filayo inay dhaqan galaan, cilmi-baarista muhiimka ah ma sii joogi doonto,laakiin waligeed waligeed mar dambe ma noqon doono wax aan horay loo arag. Tani waxay noqon doontaa si tartiib tartiib tartiib tartiib ah nidaamka raadinta cusub